Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) - Hello Sayarwon
Dr. K Zin Thwe မှ ရေးသားသည်။ 15/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ကဘာလဲ။
နှာခေါင်းအသားပိုများဆိုသည်မှာ နူးညံ့ပြီး နာကျင်မှုကင်းသော ကင်ဆာမဟုတ်သော နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် နံရံများ (သို့) နှာခေါင်းနှင့် ဦးခေါင်းခွံကြားဆက်သွယ်ထားသော လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် sinus များမှ ကြီးထွားမှုများဖြစ်သည်။ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်သော ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်မှု၊ ဆေးဓါတ်မတည့်မှု (သို့) အချို့ ကိုယ်ခံအားကမောက်ကမ ဖြစ်သော ရောဂါများကြောင့် နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ရာမှတစ်ဆင့် အသားပိုများဖြစ်တတ်သည်။
သေးငယ်သော နှာခေါင်းအသားပိုများသည် ရောဂါလက္ခဏာ မပြပါ။ သို့သော် ပိုကြီးသော အသားပိုများ (သို့) အစုလိုက် နှာခေါင်းအသားပိုများသည် အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ အနံ့မရခြင်း နှင့် မကြာခဏ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှာခေါင်းအသားပိုများသည် အလွန် အဖြစ်များပါသည်။ ၎င်းသည် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ငယ်ရွယ်သူနှင့် သက်လတ်ပိုင်းတွင် အများဆုံးဖြစ်တတ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းရင်းများကို လျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါမဖြစ်အောင် စီမံနိုင်ပါသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှာခေါင်းနောက်ဖက်တွင် အချွဲများစုပြီး အာခေါင်တွင်းသို့ ပြန်စီးဆင်းခြင်း
အနံ့အာရုံ ခံနိုင်စွမ်းနည်းခြင်း (သို့) အနံ့မရခြင်း
အရသာ ခံနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း
မျက်နှာ နာကျင်ခြင်း (သို့) ခေါင်းကိုက်ခြင်း
နှာဖူးနှင့် မျက်နှာတွင် လေးလံနေသော ဖိအားကို ခံစားရခြင်း
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများ ရှိနေမလား ဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲကတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် သင့်လက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာခြင်း
အမြင်အာရုံပြဿနာ။ ။ နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံနည်းခြင်း (သို့) မျက်လုံးရွေ့လျားမှု အခက်အခဲရှိခြင်း
မျက်လုံးတစ်ဝိုက် ဆိုးရွားစွာ ရောင်ရမ်းခြင်း
ပိုဆိုးလာသော ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် အတူ အဖျားကြီးခြင်း (သို့) ခေါင်း ရှေ့မငိုက်နိုင်ခြင်း
သင့်တွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခု ခံစားနေရလျှင် (သို့) မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေလျှင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခန္ဓါကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံ မတူညီကြပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဘာလဲဆိုတာ သိရှိဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှာခေါင်းအသားပို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို သဲကွဲစွာ မသိရပါ။
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နှာခေါင်းအသားပို ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Aspirin (အပ်စပရင်) ဆေး ဓါတ်မတည့်ခြင်း
မှိုပိုးကြောင့်ဖြစ်သော ဓါတ်မတည့် နှာပိတ်ခြင်း
Cystic fibrosis (အချွဲနှင့် ချွေး ဂလင်းများ ထိခိုက်သော မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါ)
Churg-Strauss syndrome (သွေးကြောများရောင်ရမ်းသော ရောဂါ)
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
နှာခေါင်းအသားပို ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများနှင့် ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်းမေးခွန်းများ ဖြေခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံး စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းကို စမ်းသပ်ခြင်း
Cystic fibrosis ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း
Nasal Polyps (နှာခေါင်းအသားပိုများ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှာခေါင်းအသားပိုရောဂါ ပထမဆုံးကုသမှုသည် သူတို့၏ အရွယ်အစားကို လျော့ချ ဖယ်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ဖို့ အရင်ဦးဆုံး ဆေးဝါးများနှင့် ကုသရသည်။ ဆေးဝါးကုသမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Nasal corticosteroids ။ ။ အရောင်ကျစေရန်အတွက် fluticasone (Flonase, Veramyst), budesonide (Rhinocort), flunisolide, mometasone (Nasonex), triamcinolone (Nasacort AQ), beclomethasone (Qnasl, Beconase AQ), ciclesonide (Omnaris, Zetonna)
Corticosteroids သောက်ဆေး နှင့် ထိုးဆေး ။ ။ လိမ်းဆေး၊ဖြန်းဆေးနှင့် မသက်သာလျှင် (သို့) နှာခေါင်းအသားပိုသည် အလွန်ဆိုးရွားလျှင် ပေးသည်။
အခြားဆေးဝါးများ။ ။ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်း နှင့် လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် (sinus) တွင် နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသရန် ။ ဓါတ်မတည့်မှုကို ကုသဖို့ Antihistamines နှင့် နာတာရှည် (သို့) ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဖြစ်နေသော ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကုသရန် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး။
ဆေးဝါးများ မတိုးတော့လျှင် ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့သော် အသားပိုများသည် ပြန်ဖြစ်တတ်သော သဘာဝရှိသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နှာခေါင်းအသားပို ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် နှာခေါင်းအသားပိုကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်မှုနှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ကို ကုသစီမံခြင်း
နှာခေါင်းကို ကျိန်းစပ်စေသော အရာများကို ရှောင်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်သောအရာများ၊ ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်ငွေ့၊ ဓါတု ဓါတ်ငွေ့များ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အစအနများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ခြင်း။ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းနှင့် လှိုဏ်ခေါင်းပေါက် (sinus) များ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် လက်ကို ပုံမှန်၊ စင်ကြယ်စွာဆေးကြောခြင်း ။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်း စိုစွတ်မှုရှိစေရန်၊ နှာခေါင်းလှိုက်ခေါင်းပေါက် (sinus) များမှ အချွဲစီးဆင်းမှု ကောင်းစေရန်၊ နှာပိတ်ခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် သင့်အိမ်ကို ရေငွေ့လွှတ်ပေးထားပါ။
နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အချွဲစီးဆင်းမှု ကောင်းစေရန် နှင့် ဓါတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်များနှင့် အခြားအရာများကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန် နှာခေါင်း ဆေးကြောခြင်းကို ပြုလုပ်ပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/basics/definition/con-20023206. Accessed October 6th, 2016.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/177020.php. Accessed October 6th, 2016.
http://www.webmd.com/allergies/guide/nasal-polyps-symptoms-and-treatments. Accessed October 6th, 2016.
http://www.nhs.uk/conditions/polyps-nose/Pages/Introduction.aspx. Accessed October 6th, 2016.